Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in ugu yaraan 8 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah lagu dilay gobolka Jubbada Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowlada Soomaaliya oo sheegtay in ugu yaraan 8 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah lagu dilay gobolka Jubbada Hoose
Taliyaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cali Baashi.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Soomaaliya oo ay dabada ka riixayaan kuwa AMISOM ayaa ku dilay deegaan u dhow tuulada Beerxaani oo kutaala gobolka Jubbada Hoose ugu yaraan sideed dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, sida ay maanta oo Talaado ah tabisay wakaalada wararka dowlada Soomaaliya ee Sonna.
Isaga oo la hadlayay Sonna taliyaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cali Baashi ayaa cadeeyay in ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM in ay qaadeen howlgalo ayna ku dileen ugu yaraan sideed dagaalyahan oo katirsan kooxda hubaysan ee Al-Shabaab.
Dilka dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay sheegatay dowlada ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya iyo AMISOM ay wadaan howlgalo culus oo ka dhan ah saldhigyada Al-Shabaab ee gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
February 1, 2021 Ilaa 8 qof oo ku geeriyooday weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho